Kooxdan ayaa ah tii ugu horreysay wax noqon kara kumanaan qof oo dalka ku yaalla Waqooyiga Afrika looga soo rarayo barnaamij cusub.
Tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib ballanqaad uu madaxweyne Paul Kagame sameeyey sanadii 2017, isaga oo “hoy” u yaboohay Afrikaanta, kadib markii ay soo baxeen in jir dil, xadgudubyo galmo iyo ku shaqeysasho qasab ah loogu gaysto Libya.
“Hadda ay cago dhigteen” waxaaa sidaas barta twitter kusoo qortay hay’adda UNHCR, ayada oo caruur aanay cidna la socon, hooyooyin keligood caruur korsada, iyo qoysas ay tageen magaalada Kigali, goor dambe oo khamiistii ahayd.
Qofka ugu da’da yaraa ayaa ahaa gabar 2 bilood jirta oo ay dhaleen waalidiin Soomaali ah.
Sarkaal ka tirsan QM ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in duulimaadka midkan xiga oo ay saaran yihiin 125 qof la qorsheeyey 10-ka illaa 12-ka October.
Dadkan ayaa la dejin doonaa xarun ku-meel gaar ah, ka hor inta aan dib u dejin loogu sameyn qeybo kale oo ka mid ah dalka Rwanda, haddii aysan dooneyn inay dalalkooda dib ugu laabtaan.
Dadka cusub ee shalay yimid ayaa degi doona xarunta qaxootiga ee ku-meel gaarka ah ee Gashora oo ku taalla degmada Bugesera oo qiyaastii 60km u jirta magaalada Kigali.
Madaxweyne Kagame ayaa markii ugu horreysay yaboohay inuu qaato Afrikaanta ku xaniban Libya, kadib markii warbixin uu diyaariyey taleefishinka CNN ay muujisay wax u muuqday suuq addoonsi oo halkaas ku yaalla.
Xaaladda ayaa noqotay mid deg deg ah bishii July markaasi oo in ka badan 40 qof lagu dilay duqeyn diyaaradeed oo haleeshay xarun lagu xabiso muhaajiriinta oo ku taalla magaalada Tajoura ee dalka Libya.
QM ayaa sheegeysa in qiyaastii 42,000 oo ah qaxooti u badan Afrikan ay iminka ku sugan yihiin Libya.